Sosialy Archives -
Noho ny fiarovana ny “carreau”n’ ny parvis : Voatery nasiana “oxygène” ireo zazakely marary ao amin’ny hopitalin-jazakely
Nirefotra indray ny baomba mandatsa-dranomaso teny Analakely sy ny manodidina omaly. Nanomboka maraina izany ary nitohy nandrapahariva ny andro. Izany no rivotra mitsoka eto Madagasikara vao miandoha ny taona. Ankoatra ireo mpivarotra, ireo mpanao kilalao …Tohiny
Maro ny fanakianana, tsy latsa-danja amin’izany koa ny fandotoana an’i Madagasikara any ivelany any amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera. Tsy vitsy ireo mihinana amam-bolony, tsy manadihady ny tena zava-misy marina eto amin’ny firenena, fa mionona amin’ireo filazam-baovao ...Tohiny